ပထမ 12 ရောမဧကရာဇျခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Pontifex Maximus အဖြစ် Julius ကဲသာဘုရင်၏ဦးခေါင်းဆောင်သော Silver, ဒေနာရိတစ်ပြား, 44-45 ဘီစီဂျီ Ferrero သည်ကဲသာဘုရင်၏အမြိုးသမီးမြား, နယူးယောက်, Wikimedia ၏ 1911. Courtesy လုပ်ကြံလေ၏။
(ဂါယု) Julius Caesar ရောမသမ္မတနိုင်ငံရဲ့အဆုံးမှာတို့သည်ကြီးစွာသောရောမခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Julius Caesar က c အတွက်ဇူလိုင်လ 13 ရက်နေ့တွင်,3ရက်အတွင်းဇူလိုင်လ၏ Ides မတိုင်မီမွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ 100 ကိုဘီစီသူ့ဖခင်ရဲ့မိသားစုရောမမြို့, တဲ့ Romulus ၏ပထမဦးဆုံးရှငျဘုရငျအား၎င်း၏နွယ်ခြေရာကောက်သော Julii ၏ patrician gens, နှင့်နတ်ဘုရားမဗီးနပ်စ်ကနေဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့မိဘဂါယုကဲသာဘုရင်နှင့် Aurelia, လုကိ Aurelius Cotta ၏သမီးခဲ့ကြသည်။ ကဲသာဘုရငျမှလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းဖြင့် related ခဲ့သည် Marius လူကြိုက်များထောက်ခံနှင့်ဆန့်ကျင်တဲ့သူ, Sulla အဆိုပါထောက်ခံသူကား, Optimizer ။
44 ခုနှစ်မှာသူတို့ကဲသာဘုရင်မင်းကြီးသည်ဖြစ်လာရန်ရည်မှန်းခဲ့သည်ကိုကွောကျရှံ့ဟုဆိုကာဘီစီပူးပေါင်းကြံစည်သည့်အပေါ်ကဲသာဘုရင်ကိုလုပ်ကြံ မတ်လ Ides ။
Julius Caesar အထွေထွေတစ်နိုငျငံရေး, တစ်ဦးပိုငျသောသူတစ်ဦးအဟောအပွောကောငျးနှင့်သမိုင်းပညာရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကဲသာဘုရငျပြက္ခဒိန် fixed ။
သူကညီလာခံနှင့်အထက်လွှတ်တော်မှတက်ခဲ့ကြသည်အရာကိုသိဖတ်ရှုဖို့ဂရုစိုက်တဲ့သူကိုလူတိုင်းပါစေရန်အဖိုရမ်အပေါ် posted ခဲ့သည့်ပထမဦးဆုံးသတင်းစာရွက်, Acta Diurna, ဖန်တီးရန်စဉ်းစားနေသည်။
နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပေမယ့်ကဲသာဘုရငျကိုရောမဧကရာဇ်၏အုပ်စိုးသောမင်းနေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြသတိပြုပါ, ထိုကဲသာဘုရင်၏ပထမဦးဆုံး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ကြောင့်ပဲသည်သူ၏နာမကိုအမှီဖြစ်ခဲ့သည်။ Julius Caesar တစ်ခုဧကရာဇ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
Octavian - ဩဂုတ်
အလွန်အရေးကြီးသည်ကဲသာဘုရငျ Divi filius ဩဂုတ်ဩဂုတ်။ ©အိတ်ဆောင်သမိုင်းစာစောင်တစ်ခုတွင်အစီအစဉ်ဘို့က Natalia Bauer ကထုတ်လုပ်ဗြိတိသျှပြတိုက်၏ဂေါပက။
ဂါယု Octavius ​​- ခေါ်ဩဂုတ် - နိုက်တစ်သာယာဝပြောတဲ့မိသားစုမှစက်တင်ဘာလ 23, 63 ဘီစီရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူ Julius ကဲသာဘုရင်၏အကြီးအ-တူခဲ့ပါတယ်။
ဩဂုတ် Velitrae, ရောမမြို့၏အရှေ့တောင်ဘက်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူ့ဖခင် (ဃ။ 59 ဘီစီ) ကဲမငျးဖွစျလာသူတစ်ဦးအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မယ်တော်, Atia, Julius ကဲသာဘုရင်၏တူမဖြစ်ခဲ့သည်။ ရောမဩဂုတ် '' စည်းမျဉ်းတစ်ခုလိုက်ခြင်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေး၏ခေတ် ။ သူဟာကြီးစိုးသောအသက်အရွယ်သည်သူ၏ title- ဖြင့်သင့်ကိုခေါ်ကြောင်းရောမသမိုင်းမှအလှနျအရေးကွီးခဲ့ သည့် Augustan ခေတ် ။
အလွန်အရေးကြီးသည်တိဗေရိကဲသာဘုရငျဩဂုတ်အလွန်အရေးကြီးသည်တိဗေရိကဲသာဘုရငျဩဂုတ်။ အိတ်ဆောင်သမိုင်းစာစောင်တစ်ခုတွင်အစီအစဉ်ဘို့က Natalia Bauer ကထုတ်လုပ်ဗြိတိသျှပြတိုက်၏©ဂေါပက,
တိဗေရိ 42 ဘီစီမွေးဖွားခဲ့သည်; အေဒီ 37 သေခံရ၏ ဧကရာဇ်အေဒီ 14-37 အဖြစ်စိုးစံလေ၏။ (သူ၏ရုပ်ပုံလွှာအောက်တိဗေရိအပေါ်နောက်ထပ်အင်ဖို။ )
တိဗေရိ, ရောမမြို့၏ဒုတိယဧကရာဇ်, ဩဂုတ်၏ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ခဲ့များနှင့်ရောမလူတို့နှင့်အတူရေပန်းစားမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူ Capri ကျွန်းမှ Self-ချမှတ်ပြည်ပရောက်သို့သွားလေ၏နှင့်ရက်စက် left အခါ, ရည်မှန်းချက်ကြီး Praetorian ဌာနမှူး, အယ်လ် Aelius Sejanus ပြန်ရောမမြို့မှာတာဝန်ခံ, မိမိနိစ္စထာဝရကျော်ကြားမှုကိုတံဆိပ်ခတ်။ ကြောင်းအလုံအလောက်မပါလျှင်, တိဗေရိနိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှု (maiestas) သွန်းလောင်းပေးခြင်းအားဖြင့်လွှတ်တော်အမတ်များဒေါသထွက်သည်သူ၏ရန်သူများကိုဆန့်ကျင်ပညတ်နှင့် Capri အတွက်သူကြိမ်မြိန်ခဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိမ်ကောက်ယိုယွင်းစေ့စပ်ခဲ့ကြပေမည်နှင့်အမေရိကန်အတွက်ယနေ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာပါလိမ့်မယ်နေစဉ်။
တိဗေရိတီ၏သားခဲ့သညျ။ ကလောဒီးယပ်နီရိုနှင့် Livia Drusilla ။ မယ်တော်ကွာရှင်းနှင့် 39 ဘီစီတိဗေရိအတွက် Octavian (ဩဂုတ်) နောက်အိမ်ထောင်ပြုသူ 13 ဘီစီကောင်စစ်ဝန်ဖြစ်လာခဲ့သည်သား Drusus ခဲ့ 20 ခန့်ဘီစီ Vipsania Agrippina လက်ထပ်ခဲ့သည်။ 12 ဘီစီခုနှစ်, ဩဂုတ်သူဩဂုတ် '' မုဆိုးမသမီးဂျူလီယာလက်ထပ်ထိမ်းမြားနိုင်ဒါတိဗေရိကွာရှင်းရအခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်။ ဤသည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမပျော်ခဲ့ပေမယ့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရာဇပလ္လင်အဘို့အညီတိဗေရိ၌ထားလေ၏။ တိဗေရိပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အရောမမြို့စွန့်ပစ် (သူသည်မိမိအသက်တာ၏အဆုံးမှာနောက်တဖန်လုပ်ခဲ့တယ်) နှင့် Rhodes သို့သွားကြ၏။ ဩဂုတ် '' ဆက်ခံမည့်အစီအစဉ်သေဆုံးမှုအားဖြင့်တားဆီးခဲ့ခဲ့လျှင်, မိမိသားအဖြစ်တိဗေရိမွေးစားခြင်းနှင့်တိဗေရိသူ့ကိုယ်ပိုင်သားကသူ့တူ Germanicus အဖြစ်ချမှတ်ခဲ့ရသည်။ တိဗေရိပုအထက်လွှတ်တော်အားဖြင့်ဧကရာဇ်မဲပေးခဲ့သူ၏အသက်တာ၏နောက်ဆုံးနှစ်တွင်ဩဂုတ်တိဗေရိနှင့်အတူစိုးမိုးရေး shared နှင့်သူသေဆုံးသောအခါ။
တိဗေရိ Sejanus ယုံကြည်စိတ်ချရသူသစ္စာဖောက်သောအခါမိမိအအစားထိုးဘို့သူ့ကိုမြောကျမတို့ခံရဖို့ထင်ရှား။ , Sejanus သူ၏မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများ, ကြိုးစားခဲ့ကွပ်မျက်ခံရ, ဒါမှမဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခဲ့ကြသည်။ Sejanus ၏သစ္စာဖောက်ပြီးနောက်တိဗေရိရောမမြို့ကိုယ်နှိုက်ကို run ပါစေနဲ့ကွာနေ၏။ သူကအေဒီ 37 မတ်လ 16 ရက်နေ့တွင် Misenum မှာသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
Caligula "Little ကဖိနပ်"
ဂါယုကဲသာဘုရငျဩဂုတ် Germanicus Caligula ။ အိတ်ဆောင်သမိုင်းစာစောင်တစ်ခုတွင်အစီအစဉ်ဘို့က Natalia Bauer ကထုတ်လုပ်ဗြိတိသျှပြတိုက်၏©ဂေါပက,
စစ်သားအဖြစ်သူသည်မိမိအဘ၏တပ်များနှင့်အတူတဲ့အခါမှာဝတ်ဆင်ငယ်စစ်တပ်ဘွတ်ဖိနပ်အဘို့ဂါယုကဲသာဘုရငျဩဂုတ် Germanicus Caligula '' နည်းနည်းဘွတ်ဖိနပ် '' ကောင်လေးကချစ်စနိုး။ ပိုများသောအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။
"Caligula '" Little ကဖိနပ်' ဂါယုကဲသာဘုရငျဩဂုတ် Germanicus သြဂုတ်လ 31 မွေးဖွားခဲ့သည်, အေဒီ 12 အဖြစ်လူသိများ, အေဒီ 41 သေဧကရာဇ်အေဒီ 37-41 အဖြစ်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ Caligula ဩဂုတ်၏သား '' မွေးစားမြေး, အလွန်လူကြိုက်များ Germanicus, သူ၏ဇနီး, Agrippina ဩဂုတ်ခဲ့သူအသက်ကြီး '' မြေးများနှင့်မိန်းကလေးသီလတစ် Paragon ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဧကရာဇ်တိဗေရိမတ်လ 16, အေဒီ 37 ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်ခဲ့သောအခါသူ၏အလိုတော် Caligula နှင့်သူ၏ဝမ်းကွဲတိဗေရိ Gemellus အမွေခံအမည်ရှိ။ Caligula အလိုတော်လက်မှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတစ်ဦးတည်းသောဧကရာဇ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အစပိုင်းမှာ Caligula အလွန်ရက်ရောခြင်းနှင့်လူကြိုက်များခဲ့ပေမယ့်အလျင်အမြန်ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ သူသည်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခဲ့ရောမမြို့စေတနာစိတ်ပျက်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထစ်အငေါ့ကိုမှအရသာနှင့်ရူးသွပ်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Praetorian စောင့်တပ်ဖွဲ့သူ့ကိုဇန်နဝါရီ 24 ရက်တွင်အေဒီ 41 ဦးသေဆုံးခဲ့ရသည်။
မိမိအ Caligula ခုနှစ်တွင်: ပါဝါများ၏အကျင့်ပျက်ခြစားမှု, အန်သိုနီအေ Barrett Caligula ရဲ့နန်းစံစဉ်ကာလအတွင်းအများအပြားလက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ရပ်များစာရင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အခြားသူတွေများထဲတွင်သူမကြာမီဗြိတိန်မှာအကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်ကြောင်းမူဝါဒတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူသည်န့်အသတ်တန်ခိုးနှင့် full-စုံတဲ့ဧကရာဇ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသူယောက်ျား၏ပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
Barrett ဧကရာဇ် Caligula ၏ဘဝနှင့်မင်းနန်းစံဘို့စာရင်းကိုင်အတွက်လေးနက်သောအခက်အခဲများရှိပါသည်ဟုဆိုသည်။ Caligula ရဲ့4နှစ်နန်းစံကာလ Julio-Claudians ၏ချရန် '' အကောင့်မှပျောက်နေသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့သမိုင်းသတင်းရင်းမြစ်နှောင်းပိုင်းစာရေးဆရာများ, တတိယရာစုသမိုင်းပညာရှင် Cassius Dio နှင့်နှောင်းပိုင်း 1st ရာစုအတ္ထုပတ္တိ Suetonius မှအဓိကအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားရှိပါသည်။ Seneca အဘိဓါန် Younger ကတစ်ခေတ်ပြိုင်ခဲ့ပေမယ့်သူကဧကရာဇ် disliking များအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြောင်းပြချက်နှင့်အတူအတွေးအခေါ်ပညာရှင်ဖြစ်ခဲ့သည် - Caligula ရဲ့ Seneca အဘိဓါန်ရဲ့အရေးအသား၏ဝေဖန်မှုများနှင့်သူ၏ပြည်ပရောက်သို့ Seneca အဘိဓါန်များပေးပို့ခြင်း။ လက်ဇန္ဒြီးယား၏ဖီလိုယုဒအမျိုး၏ပြဿနာများနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာနှင့်အာလေဇဟေလသလူနှင့် Caligula အပြစ်တင်ခဲ့သူနောက်ထပ်ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ဂျူးသမိုင်းပညာရှင်တစ်နည်းနည်းကြာတော့ဂျိုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ Caligula ၏အသေခံခြင်းအသေးစိတ်, ဒါပေမယ့် Barrett ကပြောပါတယ်, သူ့အကောင့်အမှားနှင့်အတူရောထွေးနှင့် riddled ဖြစ်ပါတယ်။
Barrett Caligula ပေါ်တွင်ပစ္စည်းအများစုအသေးအဖွဲကြောင်းထပ်ပြောသည်။ ဒါဟာသက်ကရာဇျစဉျတင်ဆက်ဖို့တောင်ခဲယဉ်းပါတယ်။ သို့သော် Caligula နာမည်ကျော်စိတ်ကူးစိတ်သန်းရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာအလားတူတိုတောင်းသောစစ်မှုထမ်းတွေနဲ့တခြားဧကရာဇ်ထက် ပို. မီး။
တိဗေရိသူ Caligula မဆိုပြိုင်ဘက်သတ်မယ်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအသိအမှတ်ပြုသော်လည်းတစ်ဦးတည်းသောဆက်ခံအဖြစ် Caligula အမည်ကိုမ Remembering, တိဗေရိ prescient မှတ်ချက်တွေကိုဖန်ဆင်း:
"သင်ကဒီကောင်ကလေးကိုကွပ်မျက်မည်အကြောင်း, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခြားဖြင့်အသေခံရလိမ့်မည်။ "
ချရန်ရာဇဝင် VI ကို။
' "ငါရောမမြို့ရဲ့ရငျခှငျ၌မြွေဆိုး nursing ငါ' 'သူကတစ်ချိန်ကကဆိုသည်။ ' 'ကျွန်မမီးနေရောင်-ရထားကို mishandle နှင့်လောကဓာတ်လုံးကိုညိကြလိမ့်မည်သူတစ်ဦး Phaethon ပညာပေးနေပါတယ်။ "
Caligula ၏ဘဝအသက်တာရောဘတ်ချိုင်း '' Suetonius ၏ဘာသာပြန်ချက် '' ကနေ။
တိဗေရိကလောဒီးယပ်ကဲသာဘုရငျဩဂုတ် Germanicus တိဗေရိကလောဒီးယပ်ကဲသာဘုရငျဩဂုတ် Germanicus ။ အိတ်ဆောင်သမိုင်းစာစောင်တစ်ခုတွင်အစီအစဉ်ဘို့က Natalia Bauer ကထုတ်လုပ်ဗြိတိသျှပြတိုက်၏©ဂေါပက,
ti ။ ကလောဒီးယပ်နီရို Germanicus ပိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော (54 အေဒီသေဆုံး, 10 ဘီစီမွေးဖွားခဲ့သည်, အောက်တိုဘာလ 13, 54 အေဒီ 41- ဇန်နဝါရီ 24, ဧကရာဇ်အဖြစ်အုပ်ချုပ်) ....
ကလောဒီးယပ်အများအပြားအတွေးကသူ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်ထင်ဟပ်ထားတဲ့အမျိုးမျိုးသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခများကြောင့်ထံမှခံစားခဲ့ရသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ကလောဒီးယပ်, လုံခြုံသူ့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့တကယ်တော့ချောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လုပ်ဆောင်ရန်မအများပြည်သူတာဝန်များကိုရှိခြင်း, ကလောဒီးယပ်သည်သူ၏အကျိုးစီးပွားကိုလိုက်အခမဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ၏ပထမဦးဆုံးပြည်သူပိုင်ရုံး 46. ကလောဒီးယပ်၏အသက်အရွယ်မှာရောက်လာသည်ကသူ့တူဇန်နဝါရီ 24 ရက်တွင်, သူ့သက်တော်စောင့်နေဖြင့်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်မကြာမီပြီးနောက်ဧကရာဇ်ဖြစ်လာပြီးယင်းအစဉ်အလာ 41 အေဒီလောဒီးယပ်စတစ်ကာစရာကုလားကာနောက်ကွယ်မှပုန်းအောင်းသည့် Praetorian စောင့်တပ်ဖွဲ့အချို့တွေ့ခဲ့သည်။ ကိုယ်ရံတော်ဧကရာဇ်အဖြစ်သူ့ကိုချီးကျူး။
ဒါဟာရောမမြို့ဗြိတိန်နိုင်ငံ (43) ကိုသိမ်းပိုက်ကြောင်းကလောဒီးယပ်၏နန်းစံစဉ်ကာလအတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ တိဗေရိကလောဒီးယပ် Germanicus အမည်ရှိခဲ့သော 41 တှငျမှေးဖှားကလောဒီးယပ် '' သား, ဒီ re-အမည်ရှိ Britannicus ဖြစ်ခဲ့သည်။ ချရန်သည်မိမိအတွက်ဖျောပွထားသကဲ့သို့ပင် Agricola , Aulus Plautius သူ၏အဟောင်းသားအနာဂတ်ကို Flavian ဧကရာဇ် Vespasian ပါဝင်သည့်ရောမအင်အားသုံးနှင့်အတူ Plautius အောင်မြင်စွာကျူးကျော်ဦးဆောင်နေပြီးမှကလောဒီးယပ်ကခန့်အပ်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ပထမဦးဆုံးရောမဘုရင်ခံ, ဖြစ်ခဲ့သည်, တိတု, Britannicus ၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
မိမိအစတုတ္ထဇနီးရဲ့သား, အယ်လ် Domitius Ahenobarbus (နီရို) ချမှတ်ပြီးနောက်အေဒီ 50 ခုနှစ်, ကလောဒီးယပ်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနီရို Britannicus ကျော်ဆက်ခံဘို့ပိုမိုနှစ်သက်ခဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကလောဒီးယပ် '' ဇနီး Agrippina, သူမ၏သားရဲ့အနာဂတျမှာယခုလုံခြုံ, အောက်တိုဘာလ 13 ရက်နေ့ကတစ်ဦးအဆိပ်မှိုအားဖွငျ့သူမ၏ခင်ပွန်းဦးသေဆုံးသည်ဟုအစဉ်အလာကရှိပါတယ်, အေဒီ 54 Britannicus 55 အတွက်သဘာဝကွယ်လွန်သွားပြီထင်နေသည်။
အလွန်အရေးကြီးသည်နီရိုကလောဒီးယပ်ကဲသာဘုရငျဩဂုတ်နီရို။ ©အိတ်ဆောင်သမိုင်းစာစောင်တစ်ခုတွင်အစီအစဉ်ဘို့က Natalia Bauer ကထုတ်လုပ်ဗြိတိသျှပြတိုက်၏ဂေါပက။
နီရိုကလောဒီးယပ်ကဲသာဘုရငျဩဂုတ် Germanicus (- ဇွန်လ 9, 68, အေဒီ 37 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ 15 ရက်မွေးဇွန်လအေဒီ 68 သေဆုံး, အောက်တိုဘာလ 13, 54 အုပ်ချုပ်) ။
နီရိုရဲ့သေခြင်းမှာပထမဦးဆုံးဝမ်းမြောက်ခြင်းကြိမ်တိုင်တိုင်နှင့်အတူကြိုဆိုခဲ့ပေမယ့် "ကလွှတ်တော်အမတ်များနှင့်လူများနှင့်မြို့ soldiery တို့တွင်မွို့တှငျ, ဒါပေမယ့်လည်းအပေါငျးတို့သ Legion နှင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအကြားမသာ, စိတ်ခံစားမှုအမျိုးမျိုးကွဲပြားထ; အင်ပါယာ၏လျှို့ဝှက်ချက်များအတွက်ခဲ့သည် ယခုတစ်ဧကရာဇ်တခြားနေရာရောမမြို့မှာထက်ကိုဖန်ဆင်းနိုင်ကြောင်း, ထုတ်ဖော်။ "
-Tacitus သမိုင်း I.4
လုကိ Domitius Ahenobarbus, Gnaeus Domitius Ahenobarbus နှင့် Caligula ရဲ့ညီမ Agrippina ၏သား Younger မှာဒီဇင်ဘာလ 15 အေဒီ 37 ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည် Antium နာမည်ကြီးမီးထွက်ဖဲ့သောအခါအနီရိုတည်းခိုခဲ့သည်ဘယ်မှာလည်းဖြစ်သော။ သူ့ဖခင်လူငယ်တစ်ဦးကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ် 40 သေဆုံး, လုကိ 47 အတွင်း Trojan ဟာအားကစားပြိုင်ပွဲအတွက်လူငယ်ဦးဆောင်နှင့် 53 နွေဦးလက်တင်ဂိမ်းတွေအတွက်မြို့ (ဖြစ်ကောင်း) ၏ဌာနမှူးဖြစ်ခြင်းအပါအဝင်အများအပြားဂုဏ်ထူး, ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူဝတ်ဆင်ခွင့်ရခဲ့သည် toga virilis လူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်မှာ (ဖြစ်ကောင်း 14) အစားပုံမှန် 16. လုကိ '' ပထွေးမှာ, ဧကရာဇ်ကလောဒီးယပ်, ဖြစ်ကောင်းသူ့ဇနီး Agrippina ၏လက်မှာအနိစ္စရောက်လေ၏။ အဘယ်သူ၏နာမကိုအမှီနီရိုကလောဒီးယပ်ကဲသာဘုရငျ (ဩဂုတ်နွယ်ဖေါ်ပြခြင်း) ကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့လုကိ, ဧကရာဇ်နီရိုဖြစ်လာခဲ့သည်။
လူကြိုက်နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုအေဒီ 62 ခုနှစ်ဥပဒေများနှင့်အေဒီ 64 ၏ရောမမြို့မှာရှိတဲ့မီးတစ်ဦးကစီးရီးနီရိုရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုတံဆိပ်ခတ်ထားကူညီပေးခဲ့သည်။ နီရိုအကြင်သူ၏နီရိုခြိမ်းခြောက်မှုအဖြစ်ယူဆခြင်းနှင့်မီးသူ့ကိုသူ၏ရွှေနန်းတော်, အတညျဆောကျဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏သတ်ပစ်ရန်အနိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုဥပဒေများအသုံးပြုသော "domus aurea ။ " 64 နှင့် 68 အကြားနီရို၏ဧရာရုပ်တုဟာ domus aurea ၏အိမ်တော်ထဲမှာရပ်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာ Hadrian ၏နန်းစံစဉ်ကာလအတွင်းပြောင်းရွေ့ခံခဲ့ရခြင်းနှင့်ဖြစ်ကောင်း 410 တွင်သို့မဟုတ်ငလျင်အားဖြင့် Goths ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်။ အင်ပါယာတစ်လျှောက်လုံးမငြိမ်မသက်ရောမမွို့ရှိဇွန်လ9အေဒီ 68 ရက်နေ့မှာသတ်သေကိုယ်တော်တိုင်ကျူးလွန်ရန်နီရိုဦးဆောင်ခေါ်သွားပါတယ်။
နီရိုအပေါ်ဗိုလ်မှူးသတင်းရင်းမြစ် Suetonius, ချရန်နှင့် Dio အဖြစ်ကျောက်စာများနှင့်ဒင်္ဂါးပြားများပါဝင်သည်။
ရောဘတ် K. Bohm ခြင်းဖြင့်> "လောင်မီးအဖြစ်နီရို," ။ အဆိုပါနျ Classical ကမ္ဘာ့ဖလား, Vol ။ 79, အမှတ်6(ဇူလိုင် - ။ သြဂုတ်လ, 1986 ခုနှစ်) ။ , စစ 400-401 ။
> Russell Mortimer Geer အားဖြင့် "နီရို၏အစောပိုင်းဘဝအပေါ်မှတ်ချက်ပြု" ။ အမေရိကန် Philological အစည်းအရုံး, Vol ၏ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာနှင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ 62, (1931), စစ။ 57-67 ။
> Fred သည် C. Albertson အားဖြင့်နီရို၏ "Zenodorus ရဲ့" Colossus, "။ ရောမမြို့, Vol အတွက်အမေရိကန်အကယ်ဒမီ၏ကိုယျတှေ့မှတျတမျး။ 46, (2001), စစ။ 95-118 ။
Servius Galba အလွန်အရေးကြီးသည်ကဲသာဘုရငျဩဂုတ်ဧကရာဇ် Galba ။ ©ဗြိတိန်ပြတိုက်အကြွေစေ့စုဆောင်းခြင်းနှင့် portableantiquities
လေးပါးဧကရာဇ်၏တစ်နှစ်ကာလအတွင်းဧကရာဇ်တစ်ခုမှာ။ (ရုပ်ပုံအောက် Galba သည်မိမိအပေါ်နောက်ထပ်အင်ဖို။ )
Servius Galba Tarracina, C. Sulpicius Galba နှင့် Mummia Achaica ၏သားအတွက်, ဒီဇင်ဘာလ 24,3ဘီစီမွေးဖွားခဲ့သည်။ Galba အဆိုပါ Julio-Claudian ဧကရာဇ်၏စိုးစံလျှောက်လုံးအရပ်ဘက်နှင့်စစ်ဘက်ရာထူးများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေမယ့်သူ (Hispania Tarraconensis ၏ထို့နောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး) နီရိုသူ့ကိုသတ်ပစ်ချင်သည်ဟုသတိထားမိဖြစ်လာခဲ့သည်သောအခါ, ထိုပုန်ကန်လေပြီ။ Galba ရဲ့အေးဂျင့်ကသူတို့ဘက်နီရိုရဲ့ praetorian ဌာနမှူးကူးအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ နီရိုသတ်သေပြီးနောက် Hispania အတွက်သူ Galba, Otho, Lusitania ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏ကုမ္ပဏီအတွက်, အောက်တိုဘာလ 68 ခုနှစ်တွင်ရောမမြို့မှလာမယ့်, ဧကရာဇ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးငြင်းခုံ Galba အမှန်တကယ်ဧကရာဇ်နှင့်ကဲသာဘုရင်၏ခေါင်းစဉ်ကိုယူပြီး, ပါဝါယူဆလာသောအခါမှကဲ့သို့ရှိ၏ပေမယ့်, လွှတ်ခြင်းပွနျလညျထူထောငျအကြောင်းကိုအောက်တိုဘာလ 15, 68 အနေဖြင့်တစ်ဦးအပျနှံလည်းမရှိ။
Galba သူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုများအတွက်လဲလှယ်အတွက် praetorians မှဘဏ္ဍာရေးဆုလာဘ်ကတိထားတော်တဲ့သူ Otho အပါအဝင်များစွာသော antagonized ။ သူတို့ကဇန်နဝါရီလ 15, 69 ရက်တွင် Otho ဧကရာဇ်အဖြစ်ကြေညာခြင်း, Galba သတ်ကြ၏။
> "ပါဝါ၏ဧကရာဇ် Galba ရဲ့ Assumption: တချို့ကသက်ကရာဇျစဉျထည့်သွင်းစဉ်းစား," Arcadio del Castillo ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Historia: Zeitschrift သားမွေး Alte Geschichte, Vol ။ 51, အမှတ်4(4th ကွာတာ။ , 2002), စစ။ 449-461 ။
အလွန်အရေးကြီးသည် Marcus Otho ကဲသာဘုရငျဩဂုတ် Otho ။ အိတ်ဆောင်သမိုင်းစာစောင်တစ်ခုတွင်အစီအစဉ်ဘို့က Natalia Bauer ကထုတ်လုပ်ဗြိတိသျှပြတိုက်၏©ဂေါပက,
လေးပါးဧကရာဇ်၏တစ်နှစ်ကာလအတွင်းဧကရာဇ်တစ်ခုမှာ။ (သူ၏ရုပ်ပုံလွှာအောက် Otho အပေါ်နောက်ထပ်အင်ဖို။ )
ဘာသာစကား Etruscan မျိုးရိုးနဲ့ရောမ Knight ၏သား Otho (Marcus Salvius Otho, 28 ဧပြီအေဒီ 32 ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးအသက် 16 ဧပြီအေဒီ 69 ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွား), သူဟာ Galba အားဖြင့်အဘယ်သူကိုမွေးစားခံရမျှော်လင့်ချက်ဧည့်ခံခဲ့သည်အေဒီ 69 ခုနှစ်တွင်ရောမဧကရာဇ်ခဲ့သည် အကူအညီပေးခဲ့ပေမယ်ထို့နောက် Galba ငါ့ရန်သူခဲ့သည်။ Otho ရဲ့စစ်သားသူ့ကိုဇန်နဝါရီလ 15, 69 ရက်တွင်ဧကရာဇ်ကွှေးကျွောပွီးနောကျ, သူ Galba လုပ်ကြံခံရခဲ့သည်။ ထိုအတောအတွင်းဂျာမနီရှိတပ်များ Vitellius ဧကရာဇ်ကိုကြွေးကြော်။ Otho ပါဝါမျှဝေဖို့နှင့် Vitellius သူ့သား-In-ဥပဒစေကမ်းလှမ်းပေမယ်သောကတ်များအတွက်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဧပြီလ 14 ရက်နေ့တွင် Bedriacum မှာ Otho ရဲ့ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်ကြောင့်အရှက်ကွဲခြင်း, မိမိသတ်သေစီစဉ်ဖို့ Otho ဦးဆောင်သည်ဟုထင်နေသည်။ သူ Vitellius အားဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့ခဲ့သည်။
Aulus Vitellius Vitellius ။ အိတ်ဆောင်သမိုင်းစာစောင်တစ်ခုတွင်အစီအစဉ်ဘို့က Natalia Bauer ကထုတ်လုပ်ဗြိတိသျှပြတိုက်၏©ဂေါပက,
လေးပါးဧကရာဇ်၏တစ်နှစ်ကာလအတွင်းဧကရာဇ်တစ်ခုမှာ။ (သူ၏ရုပ်တုကိုအောက် Vitellius အပေါ်နောက်ထပ်အင်ဖို။ )
Vitellius စက်တင်ဘာလအေဒီ 15 တွင်မွေးဖွားနှင့် Capri မှာမိမိလူငယ်သုံးစွဲခဲ့သည်။ သူနောက်ဆုံးသုံး Julio-Claudians နှင့်မြောက်အာဖရိက၏ဝန်မှအဆင့်မြင့်နှင့်အတူဖော်ရွေအသုံးအနှုန်းများအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူလည်း Arval ညီအစ်ကိုများအပါအဝင်နှစ်ဦးကိုယဇ်ပုရောဟိတ်၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ Galba 68 ခုနှစ် Vitellus '' တပ်တွေနောက်နှစ်သူ့ကိုဧကရာဇ်ကိုကြွေးကြော်အစား Galba သူတို့ရဲ့သစ္စာကျိန်ဆိုသူ့ကိုအောက်ပိုင်းဂျာမဏီ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ဧပြီလမှာတော့ရောမမြို့နှင့်အထက်လွှတ်တော်အတွက်စစ်သား Vitellius သူတို့ရဲ့သစ္စာကျိန်ဆို။ Vitellius သူ့ကိုယ်သူအသက်နှင့် pontifex maximus များအတွက်ကောင်စစ်ဝန်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဇူလိုင်လအသုံးပြုပုံအဲဂုတ္တုပြည်မှစစ်သူရဲ Vespasian ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ Otho ရဲ့တပ်တွေနှင့်အခြားသူများရောမမြို့သို့ချီတက်သူ Flavians, ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ Vitellius, အ Scalae Gemoniae အပေါ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသဖြင့်မိမိအဆုံးကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဦးသေဆုံးပြီးနှင့် Tiber သို့ချိတ်နေဖြင့်ဆွဲငင်။
အလွန်အရေးကြီးသည်တိတု Flavius ​​Vespasianus ကဲသာဘုရငျ Vespasian ။ အိတ်ဆောင်သမိုင်းစာစောင်တစ်ခုတွင်အစီအစဉ်ဘို့က Natalia Bauer ကထုတ်လုပ်ဗြိတိသျှပြတိုက်၏©ဂေါပက,
အဆိုပါ Julio-Claudians နှင့်လေးဧကရာဇ်၏ဖရိုဖရဲတစ်နှစ်အပြီးတွင် Vespasian ရောမဧကရာဇ်၏ Flavian မင်းဆက်၏ပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ပိုများသောအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ....
တိတု Flavius ​​Vespasianus အေဒီ9မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး, 10 နှစ်အကြာတွင်သူသေဆုံးချိန်အထိအေဒီ 69 ကနေဧကရာဇ်အဖြစ်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ သူကသူ့သားတိတုအားဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့ခဲ့သည်။ Vespasian ရဲ့မိဘများ, ထိုမြင်းစီးလူတန်းစား၏, T. Flavius ​​Sabinus နှင့် Vespasia Polla ခဲ့ကြသည်။ Vespasian သူဧကရာဇ်ဖြစ်လာခဲ့သည်နှစ်ဦးစလုံးအဘယ်သူကို၏သမီးနှင့်သားနှစ်ယောက်, တိတုနှင့် Domitian, ရှိခဲ့ပါတယ်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူဖလဗေီယာ Domitilla လက်ထပ်ခဲ့သည်။
အေဒီ 66 ခုနှစ်ယုဒပြည်၌ရှိသောတစ်ဦးပုန်ကန်အပြီးတွင်နီရို Vespasian ကြောင့်ဂရုစိုက်ဖို့အထူးကော်မရှင်အပ်ပေးတော်မူ၏။ နီရို၏သတ်သေပြီးနောက် Vespasian သည်သူ၏ဆက်ခံဖို့သစ္စာကျိန်ဆိုသော်လည်း, ပြီးတော့သူကသူ့သားတိတုမှယေရုရှလင်မြို့ကိုဝိုင်းထား left 69 ၏နွေဦးအတွက်ဆီးရီးယား၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အတူပုန်ကန်၏။
ဒီဇင်ဘာလ 20 ရက်နေ့တွင် Vespasian ရောမမွို့ရှိရောက်လာပြီး Vitellius သေပြီဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ဧကရာဇ်ဖွစျလာသူ Vespasian, ၎င်း၏ချမ်းသာကြွယ်ပြည်တွင်းစစ်နှင့်တာဝန်မဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအားဖြင့်ကုန်ခမ်းခဲ့ပြီးမှတစ်ကြိမ်အဆောက်အဦးအစီအစဉ်နှင့်ရောမမြို့၏မြို့အပွနျလညျထူထောငျစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ Vespasian သူ 40 ဘီလျံအထိ sesterces လိုအပ်ကြောင်းမှတ်။ သူကငွေကြေးနှင့်တိုးမြှင့်ပြည်နယ်အခွန်ဖောင်း။ သူတို့ရာထူးစောင့်ရှောက်နိုင်အောင်သူလည်းကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောလွှတ်တော်အမတ်များမှပိုက်ဆံပေးစားလေ၏။ Suetonius ပြောပါတယ်
"သူ privy ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကနေ paid အပြောအဆို၏လက်တင်နှင့်ဂရိဆရာ, ဆရာမများအတွက်တစ်ဦးသိနျး sesterces ၏ပုံမှန်လစာတည်ထောင်ရန်ပထမဦးဆုံးပါပဲ။ "
Suetonius ၏ 1914 ခုနှစျ Loeb, ဘာသာပြန်ချက်, ထိုကဲသာ "Vespasian များ၏ဘဝ" ၏ဘဝအသက်
ဤအကြောင်းကြောင့်ဒါကြောင့် Vespasian အများပြည်သူပညာရေး (Harold မြောက်အမေရိကမုဆိုးအားဖြင့်ရောမစာပေ၏သမိုင်း) ၏ system ကိုစတင်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်နိုင်ပါသည်။
Vespasian ဇွန်လ 23, အေဒီ 79 ရက်နေ့တွင်ကသဘာဝအကြောင်းတရားများ၏အနိစ္စရောက်လေ၏။
အမ်စိန့်အေမှ Woodside အားဖြင့်ယောဟနျသ Donahue နှင့် "ပညာရေးနှင့်ဝိဇ္ဇာ Vespasian ရဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုး," က> DIR တိတု Flavius Vespasianus (အေဒီ 69-79) ။ အမေရိကန် Philological အစည်းအရုံး, Vol ၏ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာနှင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ 73 (1942), စစ။ 123-129 ။
အလွန်အရေးကြီးသည်တိတုကဲသာဘုရငျ Vespasianus ဩဂုတ်အလွန်အရေးကြီးသည်တိတုကဲသာဘုရငျ Vespasianus ဩဂုတ်။ အိတ်ဆောင်သမိုင်းစာစောင်တစ်ခုတွင်အစီအစဉ်ဘို့က Natalia Bauer ကထုတ်လုပ်ဗြိတိသျှပြတိုက်၏©ဂေါပက,
တိတုအဆိုပါ Flavian ဧကရာဇ်၏ဒုတိယနှင့်ဧကရာဇ် Vespasian ၏အဟောင်းသားခဲ့သညျ။ (သူ၏ရုပ်ပုံလွှာအောက်တိတုအပေါ်နောက်ထပ်အင်ဖို။ )
တိတု, Domitian ၏အစ်ကိုနှင့်ဧကရာဇ် Vespasian နှင့်သူ၏ဇနီး Domitilla ၏အဟောင်းသား, သူ Britannicus ၏ကုမ္ပဏီအတွက်ဧကရာဇ်ကလောဒီးယပ်၏သားကြီးပြင်း, သူ၏လေ့ကျင့်ရေး shared ဒီဇင်ဘာလ 30 ရက်ဝန်းကျင် 41 အေဒီမွေးဖွားခဲ့သည်။ ဤသည်တိတုအလုံအလောက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခဲ့ရပြီးသူ၏ဖခင် Vespasian မိမိအယုဒန command ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါတစ်ဦး legatus legionis ဖြစ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုဆိုလို၏။ ယုဒပြည်၌ရှိသောနေစဉ်, တိတု Berenice, ဟေရုဒ်အဂရိပ်ပ၏သမီးနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းခဲ့သည်။ သူမသည်နောက်ပိုင်းတွင်သူဧကရာဇ်ဖြစ်လာခဲ့သည်သည်အထိတိတုသူမ၏နဲ့သူ့ရဲ့ကိစ္စဆက်လက်ရှိရာရောမမြို့သို့ရောက်ကြ၏။ Vespasian ဇွန်လ 24, 79 ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါ, တိတုဧကရာဇ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူကအခြား 26 လကြာနေထိုင်ခဲ့သည်။
အလွန်အရေးကြီးသည်ကဲသာဘုရငျ Domitianus Germanicus ဩဂုတ် Domitian ။ အိတ်ဆောင်သမိုင်းစာစောင်တစ်ခုတွင်အစီအစဉ်ဘို့က Natalia Bauer ကထုတ်လုပ်ဗြိတိသျှပြတိုက်၏©ဂေါပက,
Domitian အဆိုပါ Flavian ဧကရာဇ်၏နောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ (သူ၏ရုပ်ပုံလွှာအောက် Domitian အပေါ်နောက်ထပ်အင်ဖို။ )
Domitian အနာဂတ်မှာဧကရာဇ် Vespasian ရန်, အောက်တိုဘာလ 24 အေဒီ 51 ရက်တွင်ရောမမြို့မှာရှိတဲ့မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူ့အစ်ကိုတိတုအကြောင်းကို 10 နှစ်သည်သူ၏အကြီးတန်းခဲ့ Domitian ရောမမွို့ရှိကျန်ရစ်နေချိန်တွင်ယုဒပြည်၌သူ၏စစ်ရေးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအပေါ်သူတို့ရဲ့ဖခင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ အကြောင်းကိုယခုနှစ် 70 ခုနှစ်, Domitian Domitia Longina, Gnaeus Domitius Corbulo ၏သမီးနှင့်လက်ထပ်ပါသည်။ သူ့အစ်ကိုသေဆုံးသည်အထိ Domitian အစစ်အမှန်အာဏာကိုမခံမယူခဲ့ပါဘူး။ ထို့နောက်သူ imperium (အစစ်အမှန်ရောမအာဏာကို), ခေါင်းစဉ်ဩဂုတ်, tribunician အာဏာ pontifex maximus ၏ရုံးနှင့် pater patriae ၏ခေါင်းစဉ်ကိုရရှိခဲ့သည်။ သူကနောက်ပိုင်းမှာဆင်ဆာ၏အခန်းကဏ္ဍကိုယူခဲ့ပါတယ်။ ရောမမြို့၏စီးပွားရေးသည်မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းခံစားခဲ့ရဖူးနှင့်သူ၏ဖခင်ငွေကြေး devalued ခဲ့ပေမယ့်, Domitian သည်သူ၏သက်တမ်း၏ကြာချိန်များအတွက် (ပထမသူကြီးပြင်း, ပြီးတော့သူကတိုးလျှော့ချ) အနည်းငယ်ကပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ သူသည်ပြည်နယ်များအားဖြင့်ပေးဆောင်အခွန်ပမာဏကိုထမြောက်တော်မူ။ သူကမြင်းစီးအာဏာတိုးချဲ့နှင့်ကွပ်မျက်ခံရသည့်အထက်လွှတ်တော်အမတ်လူတန်းစားအများအပြားအဖွဲ့ဝင်များရှိခဲ့ပါတယ်။ မိမိအလုပ်ကြံခံရ (စက်တင်ဘာလ 8, အေဒီ 96) ပြီးနောက်အထက်လွှတ်တော် (damnatio memoriae) မိမိမှတ်ဥာဏ်ဖျက်ခဲ့ရပါတယ်။
ရှစစ်ပွဲများ - Plataea ၏တိုက်ပွဲ
သင်ကမဲပေးမှတ်ပုံတင်မအားဖြင့်ဂျူရီ Duty ထဲက Get နိုင်သလား?
အနောက်တိုင်းဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
အဆိုပါ Gettysburg Address ကိုအကြောင်းအချက်အလက်နဲ့ဒဏ္ဍာရီ
Biceps ယလေ့ကျင့်ခန်း: အဘယ်အရာကိုအာရုံစူးစိုက်မှုဆံပင်ကောက်ကောက် Are နှင့်သင်ဟာတစ်ခုမှာဘယ်လိုလုပ်လုပ်ပါသလား?
တွေ့ဆုံ Cast ကိုအဆိုပါ '' Beverly Hills မှာ၏ Rich ကလေးများ ''
PHP ကိုအတွက် Links များဖန်တီးနည်း
မျက်နှာပြင်ဖွဲ့စည်းပုံ (General သဒ္ဒါ)
တစ်ဦး Beginner များအတွက်တင်းနစ်ဘောလုံးရိုက်ဝယ်ယူ
ကယ်လီဖိုးနီးယားရဲ့ Sheephead Catching များအတွက်သိကောင်းစရာများ
13 အရာ Aspire ဗိသုကာပညာရှင်များကိုသိရန်လိုအပ်
အသုဘနှင့်ကိုယ်ချင်းစာကဒ်များ 26 သမ်မာကမျြးအခနျးငယျ
သေတတ်သောသိန် Venial သိန်ဝန်ခံနှင့်သဟာယ